Bhuku reNhoroondo yaVaEmmerson Mnangagwa Rokonzera Mutauro Mukuru Munyika
Bato reMDC Alliance rinoti bhuku renhoroondo yemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, iro rakaparurwa nezuro, harina kuburitsa mabasa akaipa akaitwa naVaMnangagwa munguva yeGukurahundi apo vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vanoti pane zvinhu zvakawanda zvisiri mubhuku raVaMnangagwa izvo vati zvinosanganisira zvinonzi zvakaita naVaMnangagwa munguva yeGukurahundi nezvimwe.
Mashoko aVaHlatywayo anotevera kuparurwa kwbhuku iri nezuro, iro riri kudaidzwa kuti “A Life of Sacrifice - A Biography of Emerson Mnangagwa,” rakanyorwa nevaimbova nhengo yeMDC yaimirira Bulawayo South muparamende, VaEddie Cross.
Vanhu vakawanda vaenda pamadandemutande avo eFacebook neTwitter vachitaura pamwe nekutsoropodza bhuku iri vachiti VaMnangagwa vaifanira kunge vakashandisa nguva yavakatora bhuku iri richinyorwa kugadzirisa hupfumi hwenyika uyewo vamwe vachiti bhuku iri rakanakira kuti veruzhinji vazive nzira dzakafambwa nemutungamiri wenyika.
Asi gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vati pane zvakawanda zvekudzidza mubhuku iri.
Bhuku iri rinotsanangura hupenyu hwaVaMnangagwa kubva pavakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga, kusungwa kwavaiitwa munguva yehondo yerusununguko, basa ravakabata muhurumende pasi pehutongi hwemushakabvu VaRobert Mugabe kusvika pari zvino vave mutungamiri wenyika.
Mubhuku iri, VaMnangagwa vanotsanangura kusungwa kwavakaitwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere vachiti vakatengeswa nemumwe aive mutungamiri wavo munguva yehondo uye vanotsanangurawo kuti vamwe vavaishanda navo vakavatengesa kuna VaMugabe vachiti vanhu ava vaida kuti vauraiwe zvakazoita kuti vazotiza munyika muna 2017 pakazopindira mauto mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti VaMugabe vasiye basa.
Mutungamiri weDemocratic Party, VaUrayai Zembe, vatiwo chinhu chakanaka kuti mabhuku anyorwe kuitira kuti veruzhinji vagoziva nhoroondo dzevatungamiriri vavo.
Kubva parakaparurwa nezuro, bhuku iri rinonzi riri kutengwa zvinoshura mare zvekuti nezuro chete zvinonzi kwakatengwa mabhuku anodarika zviuru makumi makumi mashanu uye riri kutengeswa nemari inoita madhora gumi nemashanu ekuAmerica.